Pradesh News | » प्रदेश १ प्रदेश १ – Pradesh News
यस्ता छन्, गठबन्धन तोड्न धनकुटाको स्थानीय पालिकामा एमालेले उठाएका महिला कमाण्डरहरु
धनकुटा। नेकपा एमाले धनकुटाले स्थानीय पालिकामा उपप्रमुख पदमा लामो समयदेखि सामाजिक र राजनीतिमा होमिएका ब्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ७ वटै पालिका जितेर क्लिनस्वीप गरेको एमालेले यस पटक पनि क्लिनस्वीप गर्ने दावी गरेको छ । एमालेले धनकुटा, पाख्रीबास, चौविसे, छथर जोरपाटी र साँगुरीगढीको उपप्रमुखमा नयाँ अनुहारलाई मौका दिएको छ भने महालक्ष्मी…
यस्ता गुण भएका छन् धनकुटामा एमालेले उठाएका पालिका प्रमुखहरु
धनकुटा। नेकपा एमाले धनकुटाले स्थानीय पालिकामा प्रमुख पदका उम्मेदवारहरु लामो समयदेखि राजनीतिमा होमिएका ब्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ७ वटै पालिका जितेर क्लिनस्वीप गरेको एमालेले यस पटक पनि क्लिनस्वीप गर्ने दावी गरेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि एमालेले उम्मेदवार बनाएका ब्यक्तिहरुको विषयमा संक्षिप्त चर्चा जानकारी यस्तो रहेको छ ।…
धनकुटाको पाख्रीबास भीम राई र चौविसेमा राजकुमार चेम्जोङ प्रमुखमा सर्वसम्मत
धनकुटा। नेकपा एमाले धनकुटाले आगमी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि पाख्रीबास नगरपालिका र चौविसे गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारको नाम टुंग्याएको छ। धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका एमाले धनकुटाका सचिवालय सदस्य भीम राईलाई मेयरमा उठाउने निर्णय गरेको छ । उपमेयरमा जिल्ला सदस्य नम्रता देउजालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । पाख्रीबास नगर कमिटिका अध्यक्ष…
धनकुटामा गठबन्धनलाई क्लिनस्वीप गर्ने एमालेका दावेदार उम्मेदवार को–को?
धनकुटा। गएको निर्वाचनमा क्लिन स्वीप गरेको एमालेले धनकुटामा सर्वसम्मत उम्मेदवार छन्न प्रयास गरिरहेको छ । एमाले धनकुटाका अध्यक्ष इन्द्रमणी पराजुलीकाअनुसार सवै स्थानीय तहमा बहुसंख्यक कार्यकर्ताको माग र रोजाइमा परेका ब्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी रहेको छ । धनकुटाको ७ वटा स्थानीय...
२०७८ चैत्र २७
धनकुटा नगरमा तामाङ र राईबीच फेरी चुनावी भिडन्तको सम्भावना, कस्ले जित्ला धनकुटा नगरपालिका?
धनकुटा । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा धनकुटामा पाँचदलिय गठबन्धन र एमालेवीच तिव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा क्लिनस्वीप गरेको एमालेलाई पुरानो विर्ता जोगाउने र पाँचदलिय गठबन्धनलाई एमालेको किल्ला भत्काउने सकस परेको छ । एक्लाएक्लै चुनाव...
दिंला–भोजपुर–घोडेटार–चुहार सडक कालोपत्रे गरिने
भोजपुर। भोजपुरलाई तराईसँग जोड्ने दिंला–भोजपुर–घोडेटार–चुहार सडक कालोपत्रे गरिने भएको छ । करिब १२५ किलोमिटरमध्ये पहिलो चरणमा हतुवागढी गाउँपालिकाको हसनपुरको चुहारबाट घोडेटार बजारसम्म २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने छ । कालोपत्रे गर्न ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसिआइपी) आयोजनाले वातावरणीय परीक्षणको...
अङ्ग्रेजी माध्यमले विराटनगरका सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धि
विराटनगर। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । महानगरपालिकाभित्र धेरै विद्यालयमा तल्लो कक्षाबाटै अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन थालिएको छ । यसबाट निजी विद्यालयका विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन् । योजनागत कदमकै कारण शैक्षिक...
सूचनाको हक कार्यान्वयनमा जोड
खोटाङ। राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त कमला ओली (थापा)ले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले मात्र देशको विकास सम्भव हुने बताउनुभएको छ । सूचनाको हक र यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी आइतबार दिक्तेलमा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले जनतालाई जगाउन र सरकारलाई घचघच्याउन सूचनाको हकको...
२०७८ चैत्र १४
प्रभावकारी बन्दै ‘बालिका बचत’ कार्यक्रम
खोटाङ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सुरु गरेको ‘बालिका बचत’ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कार्यक्रम सुरु भएयता हालसम्म नगरपालिकाभरिका १२९ बालिकाको नाममा बचत गर्ने काम भइसकेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ४६ बालिकाको नाममा खोलिएको बचत खातामा दोस्रो किस्ता र ८३...
खोटाङमा आधारभूत अस्तपाल अवस्था: शिलान्यास भयो तर अस्पताल बनेन
खोटाङ। सरकारको नीतिअनुसार गत वर्ष जिल्लाका दशमध्ये छवटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने गरी शिलान्यास गरिएको थियो । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तथा जन्तेढुङ्गा, केपिलासगढी, ऐंसेलुखर्क, रावाबेँसी र साकेला गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न शिलान्यास गरिएको हो । हलेसी तुवाचुङ...